IZIGQIBO: ZINTONI? INDAWO YOKUXABISA NOKUNYE OKUNGAKUMBI
Amaxabiso iidesimali kwinani lahlulahlula iziphumo zexabiso elingachazwanga; Inomelo olunomda. Ibhalisiwe kwinkqubo yokufakwa kwamanani kwinto ethathwa njengenani elinengqiqo. La manani asetyenziselwa ukuchaza amanani afanelekileyo okanye xa kungekho bunyani kwixabiso okanye kwisiphumo.
1 Izigqibo zeziphi?
2 Ixabiso lendawo
2.1 Inqaku lesishumi
3 Ukusebenza kweDesimali
3.1 Guqula amaqhezu abe ziidesimali
3.2 Guqula iidesimali zibe ngamaqhezu
4 Ulwahlulo lwezigqibo
4.3 Amaphepha ndaba acocekileyo
4.4 Idesimali engaphindwayo
Amaxabiso edesimali okanye amanani edesimali ziziphumo zemisebenzi ngamaqhezu amanani, aneqwalaselo yale fomyula ilandelayo 2n5m, apho oonobumba "n" no "m" bengezizo iinombolo ezingaphikisiyo. Ngokubhekisele kwamanye amanani okwenyani, ukumelwa kunokongezwa kusetyenziswa iifom ezingapheliyo, amaxesha ngamaxesha okanye indawo ezingesosiqendu.
Eli xabiso lokugqibela likwabizwa ngokungacwangciswanga njengenani lamaqhekeza kwaye libhaliwe linjalo. Ukuqukumbela, inombolo yedesimali yenye yenxalenye yedesimali kwaye ichasene namanani apheleleyo, ngenxa yesi sizathu ineempawu ezingafaniyo.
Indlela eyenziwa ngayo inkcazo, ivumela ukucaciswa kwezishumi ezikwinombolo okanye ixabiso emva kwekoma, umzekelo ukuba sinenani le-0,7654, siyaqaphela ukuba amanani edesimali ngu-4, emva koko inani ngalinye libizwa ngokwesikhundla sakho okanye ixabiso lakho kweso sikhundla.
Ngenxa yoko, inani lokuqala emva kwekoma libizwa ngokuba lilishumi; Ukuba sithatha inani elidlulileyo njengereferensi, sithi inani linesi-7 kwishumi, ngendlela efanayo sibiza inani elilandelayo eliyi-6 kwaye sithi inani liyi-6thths; emva koko landela amaxabiso ewaka lamawaka kunye nelamawaka amane.
La maxabiso asetyenziswa namhlanje kwimidlalo eyahlukeneyo, kwizifundo nakwezorhwebo nakwiindawo apho kufanelekileyo ukuseka amaxabiso edesimali. Ukubeka zonke izishumi ngamaxabiso endawo; Ngokunjalo, kwezinye iindawo zesayensi okanye kwisebe, ubunzima, izixa, imigama kwiidesimali okanye kumawakawaka ayanconywa, apho basebenzela ukumisela nayiphi na inkqubo apho ixabiso okanye inani lidityaniswa.
Xa inani lokugqibela linenani elidlulileyo elipheleleyo; Njengoko siza kubona kumzekelo olandelayo inombolo engu-3,897, inani elipheleleyo kufuneka libizwe kuqala emva koko linani ngokwexabiso lendawo yalo, masibone ukuba lifundwa njani eli nani, amakhulu amathathu anesibhozo anamanci asithoba anesixhenxe amawaka.
Ngenxa yoko, ukuba inani belingu-3, ​​89 ixabiso lendawo belinokufikelela kwikhulu, oko kukuthi, inani elo beliza kufundwa ngolu hlobo lulandelayo kumashumi amathathu anethoba amashumi alithoba.
Kukholelwa ukuba yeyona nto ibaluleke kakhulu kwaye ichaza indawo yedesimali. Ibekwe ngasekunene kweyunithi okanye kwinani elipheleleyo kwaye inceda ekuchazeni amanye amanani ngokwexabiso lendawo. Imelwe yikoma kwaye imisela zonke izishumi, ikhulu okanye lamawaka exabiso.
Xa kuqhutywa imisebenzi ebandakanya amaqhezu aneenombolo zokugqibela, iinkqubo zesiko zemathematics ezinje ngokudibanisa, ukuthabatha, ukuphinda-phinda nokwahlulahlula kufuneka zandiswe ukuze kufikelelwe kwiziphumo ezilindelekileyo; Emva koko siza kubona ezinye iindlela ezimbini, eyokuqala Ungawatshintsha njani amaqhezu abe ziidesimali kwaye eyesibini, indlela yokuguqula idesimali kwiqhezu.
Guqula amaqhezu abe ziidesimali
Kukho indlela yokuguqula amaqhezu abe ngamanani wokugqibela, nangona kunjalo, kukho amaqhezu ekufuneka esombululwe kusetyenziswa iindlela ezintsonkothileyo. Ukuba sithatha inombolo 4/5 njengomzekelo, kufuneka senze isenzo apho idinomineyitha (Inani elingezantsi); Kufuneka iphindaphindwe ngenani ukuze iziphumo zayo zibe li-10, 100 okanye 1000.
Kwimeko apho siphinda-phinda inani u-5 x 200 kwaye iziphumo ziyi-1000. Senza ngokufanayo ngenani le-numerator 4 (Elinye ngasentla) kwaye siliphindaphinde ngo-200, emva koko sifumane iziphumo ezingama-800, masibone ukuba luqhuba njani na olu hlobo: 800/1000. Ukuthatha eli qhezu siqhubeka nokulenza lula, sifumana inombolo engu-0,8.
Olu hlobo lomsebenzi lusebenza kuphela kwinani lamaqhekeza, yinto nje yokwazi amaxabiso amanani kunye nokuwasebenzisa. Kunika umdla ukufumana iziphumo kwaye kuluncedo xa ungenayo ikhalityhuleyitha ezandleni.
Guqula iidesimali zibe ngamaqhezu
Le nkqubo ilandelayo iquka ukuthatha inombolo yedesimali iqhekeza, kule meko sinenombolo engu-0,25, enexabiso lendawo elisembindini. Ukusonjululwa kolu tshintsho kuyimfuneko ukubonisa inani eliqhelekileyo ledinomineyitha, eliyi-1, elisetyenziselwa onke amanani.
Emva koko inani limi ngolu hlobo lulandelayo 0,25 / 1. Emva koko sililinganisa nelinye inani leqhezu ngale ndlela ilandelayo. Emva koko sithatha inani eli-100 njengereferensi kwaye silidibanise nokusebenza, sishiya ngolu hlobo lulandelayo: x / 100, iya kuba yile ilandelayo: 0,25 / 1 = x / 100, ukusombulula i-equation esinayo 0,25x / 100 , xa yenza lula sifumana ama-25x / 100 kwaye ukusombulula sifumana ama-25/100 okuthi xa usenza lula sifumane i-1/4
Idesimali okanye ixabiso ledesimali linokuba ziindidi ezahlukeneyo, ngqo, ngamaxesha athile amsulwa okanye ngamaxesha athile, intetho ivumela ukufumana okubizwa ngokuba kukuvelisa iqhezu eliguqula inani lokugqibela libe linani eliqiqayo, masibone ke ezi ntlobo zintathu zamanani edesimali.
Ngawo la manani apho iindawo zokugqibela zinokugqitywa kwaye zinokumiselwa ngendlela elula, banokuba nalo naliphi na ixabiso lendawo. Banobungqina obukhethekileyo bokuba idesimali yabo ayifani, okt ziziphumo zemisebenzi eyahlukeneyo, umzekelo 1/9 = 0,1 kodwa ikwalingana no-0,111111111111.
La manani aneenkcazo zokugqibela zamanani angenasiphelo kunye nokuphindaphinda iipateni zamanani, iphethini iqala kwangoko emva kwenqaku lokugqibela okanye ikoma; Amaxabiso afakwe kuseti yamanani olumko.
Amaphepha ndaba acocekileyo
Ezi decimals zinamanani aphindaphindiweyo amaxesha ngamaxesha. Ipateni iqala kwangoko emva kwenqaku lokugqibela; Ngale ndlela, kwaye ukuze ungalibeki lonke inani, ibekwa ekupheleni kwenombolo yesihlanu ephindaphindwe ngamachaphaza amathathu; okanye ixabiso lokuqala ledesimali elinedatha engasentla lisetyenzisiwe.
Ngamanani aqulathe inxenye yedesimali engaphindaphindwanga, yeyenani lamanani aqiqayo kwaye umzekelo wale lixabiso lesalathiso (, (Pi, ukuza kuthi ga ngoku khange ikwazi ukumisela amadada aphindaphindwayo kwaye bayaqhubeka nokulaliswa esibhedlele ukubona ukuba uhlobo oluthile lwexesha elithile luyafezekiswa.
Ukuba ufuna ukwazi ngakumbi ngamanani, siyakumema ukuba ufunde inqaku elilandelayo Lula amaqhezu: Funda ngamanyathelo ambalwa.